ထဈကနဲရှိ မကျြရညျကတြတျတဲ့ကောငျမလေးမဟုတျတော့ဘူး – Shinyoon
ပွနျခပြေဖို့ပွနျပွောပွဖို့စကားလုံးတှေ အရငျရှာမရခငျမှာပေါ့ မကျြဝနျးထဲမှာ မကျြရညျတှေ အရငျဝဲတယျ ငါ့ကို အဲ့လိုပွောရကျလခွေငျး ထငျရကျလခွေငျးဆိုတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ အတူ ကြှနျမ ၀မျးနညျးမှုတှပေဲ အရငျ စပွီး ဖွဈတညျတာပေါ့ ၀မျးနညျးလိုကျတာနဲ့ မကျြရညျတှေ ခကျြခငျြးကတြော့ပဲ ။ အဲ့လောကျထိကို ဟနျဆောငျမှုကငျးခဲ့တာ ဒါမှမဟုတျ ဟနျမဆောငျနိုငျခဲ့တာပေါ့ ။
စိတျထဲမှာ တဈခုခုဖွဈနတေဲ့အခါ မကျြနှာမှာ ထငျးကနဲပျေါတဲ့အထိလဲ အလိမျအညာကငျးခဲ့တယျ စကားလုံးတဈလုံးကွောငျ့ နာကငျြရတဲ့အခါ မကျြလှာက အျောတို ကပြွီးသားပဲ တဈခုခုကို မကနြေပျတဲ့အခါ နှုတျခမျးတှေ တုနျလာတဲ့အထိ ဖွဈပွီးသားပဲ တဈခုခုကွောငျ့ ဒေါသထှကျတဲ့အခါ မကျြလုံးတှေ အရောငျတောကျလာတဲ့အထိ ပျေါလှငျပွီးသားပဲ ။
ဒါတှကေ အရငျတုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့ ကြှနျမရဲ့ ပုံစံတှပေေါ့ ဟနျဆောငျမှုကငျးတယျ အရှိကို အရှိအတိုငျး ပွတယျ အရာရာကို ရငျဘတျကွီးနဲ့ ရငျးပွီး ခံစားတယျ ကိုယျစိတျထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုငျး မကျြနှာမှာ ပျေါတယျ ပွီးတော့ မကျြရညျလှယျတယျ . . .
ဒီပုံစံကွီးနဲ့ ကြှနျမ အခြိနျအတျောကွာ နထေိုငျခဲ့ဖူးတယျ ပွီးတော့ အနာတရတှတေျောတျောမြားမြားလဲ ရခဲ့ဖူးတယျ ။ အနာတရဆိုလို့သှေးခငျြးခငျြးရဲနတေဲ့ အပျေါယံ အရပွေားက အနာတှလေို့မမှတျပါနဲ့ ဘယျသူမှ မမွငျနိုငျ မသိနိုငျခဲ့တဲ့ ရငျဘတျထဲက အနာတှကေ ပိုပွီးနကျတာပါ ။ နောကျပိုငျးကြ ကြှနျမ ရငျ့ကကျြလာတယျဆိုတာထကျ ကြှနျမ နညျးနညျးဆငျခွငျပွီးနတေတျလာတယျလို့ပွောပါရစေ ။
ခဏခဏနာကငျြခဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး သာမနျနာကငျြမှုလောကျနဲ့ မကျြရညျတှေ မကတြော့ဘူး ၀မျးနညျးစရာတှေ ပါလာတဲ့ စကားလုံးတှကေိုတောငျ အပွုံးမပကျြပဲ ပွနျပွီးပွောလာနိုငျတဲ့အထိ ကြှနျမ နတေတျလာခဲ့တာပါ ။ ပတျဝနျးကငျြက စကားလုံးတှကေို ရငျဘတျကွီးထဲထညျ့ပွီး မခံစားဖွဈတော့ဘူး ။ သူက ငါ့ကို အဲ့လိုပွောတာပဲ ဘာမှမဖွဈပါဘူး ကွားတဲ့အခါ ကွားတယျလို့မှတျလိုကျတယျ ။ တဈဖကျနားက ၀ငျပွီး တဈဖကျနားက ထှကျလိုကျတယျ အဲ့အတှကျ ဘာမှ ခံစားမနတေော့ဘူး ။
သူက မကောငျးပွောနလေို့မဟုတျတမျးတရားတှပွေောနလေို့ဆိုပွီး လိုကျပွီးလဲ မရှငျးပွဖွဈတော့ဘူး ဘ၀မှာ အဆငျပွသေလိုလေး နတေတျလာပါပွီ ။ ဒီအခြိနျမှာ တျောရုံတနျရုံ ဆုံးရှုံးမှုလောကျနဲ့ ကြှနျမ အပွုံးမပကျြတော့ဘူး ထဈကနဲရှိ မကျြရညျကတြတျတဲ့ကောငျမလေးမဟုတျတော့ဘူး ။
ဘ၀ကို ပြျောသလိုလေး ဒါမှမဟုတျ အဆငျပွသေလိုလေး နတေတျထိုငျတတျလာပါပွီ ။
ကျွန်မ ၀မ်းနည်းသွားတဲ့အခါ မျက်ရည်တွေက အရင်ဆုံးကျလာတတ်ပါတယ် ပြန်ချေပဖို့ပြန်ပြောပြဖို့စကားလုံးတွေ အရင်ရှာမရခင်မှာပေါ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်တွေ အရင်ဝဲတယ် ငါ့ကို အဲ့လိုပြောရက်လေခြင်း ထင်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အတူ ကျွန်မ ၀မ်းနည်းမှုတွေပဲ အရင် စပြီး ဖြစ်တည်တာပေါ့ ၀မ်းနည်းလိုက်တာနဲ့ မျက်ရည်တွေ ချက်ချင်းကျတော့ပဲ ။ အဲ့လောက်ထိကို ဟန်ဆောင်မှုကင်းခဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် ဟန်မဆောင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ ။
စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့အခါ မျက်နှာမှာ ထင်းကနဲပေါ်တဲ့အထိလဲ အလိမ်အညာကင်းခဲ့တယ် စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့် နာကျင်ရတဲ့အခါ မျက်လွှာက အော်တို ကျပြီးသားပဲ တစ်ခုခုကို မကျေနပ်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းတွေ တုန်လာတဲ့အထိ ဖြစ်ပြီးသားပဲ တစ်ခုခုကြောင့် ဒေါသထွက်တဲ့အခါ မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာတဲ့အထိ ပေါ်လွင်ပြီးသားပဲ ။
ဒါတွေက အရင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပုံစံတွေပေါ့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းတယ် အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြတယ် အရာရာကို ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းပြီး ခံစားတယ် ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း မျက်နှာမှာ ပေါ်တယ် ပြီးတော့ မျက်ရည်လွယ်တယ် . . .
ဒီပုံစံကြီးနဲ့ ကျွန်မ အချိန်အတော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးတယ် ပြီးတော့ အနာတရတွေတော်တော်များများလဲ ရခဲ့ဖူးတယ် ။ အနာတရဆိုလို့သွေးချင်းချင်းရဲနေတဲ့ အပေါ်ယံ အရေပြားက အနာတွေလို့မမှတ်ပါနဲ့ ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင် မသိနိုင်ခဲ့တဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနာတွေက ပိုပြီးနက်တာပါ ။ နောက်ပိုင်းကျ ကျွန်မ ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်မ နည်းနည်းဆင်ခြင်ပြီးနေတတ်လာတယ်လို့ပြောပါရစေ ။
ခဏခဏနာကျင်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း သာမန်နာကျင်မှုလောက်နဲ့ မျက်ရည်တွေ မကျတော့ဘူး ၀မ်းနည်းစရာတွေ ပါလာတဲ့ စကားလုံးတွေကိုတောင် အပြုံးမပျက်ပဲ ပြန်ပြီးပြောလာနိုင်တဲ့အထိ ကျွန်မ နေတတ်လာခဲ့တာပါ ။ ပတ်ဝန်းကျင်က စကားလုံးတွေကို ရင်ဘတ်ကြီးထဲထည့်ပြီး မခံစားဖြစ်တော့ဘူး ။ သူက ငါ့ကို အဲ့လိုပြောတာပဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကြားတဲ့အခါ ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ် ။ တစ်ဖက်နားက ၀င်ပြီး တစ်ဖက်နားက ထွက်လိုက်တယ် အဲ့အတွက် ဘာမှ ခံစားမနေတော့ဘူး ။
သူက မကောင်းပြောနေလို့မဟုတ်တမ်းတရားတွေပြောနေလို့ဆိုပြီး လိုက်ပြီးလဲ မရှင်းပြဖြစ်တော့ဘူး ဘ၀မှာ အဆင်ပြေသလိုလေး နေတတ်လာပါပြီ ။ ဒီအချိန်မှာ တော်ရုံတန်ရုံ ဆုံးရှုံးမှုလောက်နဲ့ ကျွန်မ အပြုံးမပျက်တော့ဘူး ထစ်ကနဲရှိ မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်တော့ဘူး ။
ဘ၀ကို ပျော်သလိုလေး ဒါမှမဟုတ် အဆင်ပြေသလိုလေး နေတတ်ထိုင်တတ်လာပါပြီ ။